Vision and Mission » Technological University (Toungoo)
-To become an internationally recognized University that nurtures brilliant technicians and engineers who apply best practices in engineering education, research and knowledge and help the community
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၏မျှော်မှန်းချက်မှာအင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၊သုတေသနနှင့်ဗဟုသုတပညာရပ်များကိုလက်တွေ့အသုံးချပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးပြုရန်၊ ထူးချွန်ထက်မြက် သောနည်းပညာရှင်များ၊အင်ဂျင်နီယာများကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်
In order to create excellent academic environment for all – around development of community, Technological University(Toungoo) will carry out the following actions as its responsibilities.
* To train students systematically to become skilled engineers, technicians and researchers who innovate well in the community in accordance with ethics
* To train students in order to emerge brilliant engineers who keep pace with current leadership qualities and accept the realistic view
* To become the active and alert citizens with continual learning in their respective fields
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)၏တာဝန်ဝတ္တရားများမှာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ကျဥ်းပေးနိုင်သောပညာရေးဝန်းကျင်ကောင်းများအဖြစ် ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အောက်ပါအရည်အချင်းများရှိသောအင်ဂျင်နီယာများ၊ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊သုတေသနပညာရှင် များပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် ကျောင်းသားများကိုနည်းစနစ်ကျနစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးဖြစ်ပါသည်။
*လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအားကောင်းပြီးကျင့်ဝတ်နှင့်အညီအသုံးချနိုင်သောအင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊သုတေသနပညာရှင်များပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်
* ခေတ်နှင့်အညီခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးများ၊ လက်တွေ့ကျကျရှုမြင်သုံးသပ်လက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးများရှိသောထူးချွန်ထက်မြက်သည့် အင်ဂျင်နီယာများပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်
* The Management of the University shall act the perfect QMS to get excellent quality operation and service and to provide for the requirements of ISO 9001:2008 Standard.
* The Management of the University shall implement the Quality Policy of University and comply with the customer requirements for continual improvement of the Quality Management System.
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိ Operation နှင့် Service ရရှိရန် ISO 9001: 2008လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့် ပြည့်စုံသော QMS ကိုနည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)တွင် ကျင့်သုံးမည်။အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အကျိုးရှိစွာတိုးတက်နေစေခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူ (Customer)များလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေမည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်စေရန် တက္ကသိုလ်၏ အရည်အသွေးမူဝါဒကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
The Quality objectives of Technological University (Toungoo) in 2015-2016 Academic Year:
1. To reduce the percentage of undergraduate engineering students’ drop-outs to less than 5%
2. To attain the level of educational qualification recognized by Myanmar Engineering Council in the academic year of 2018-2019
3. To make an effort to get customer satisfaction by 80% in accordance with the requirements of ISO 9001:2008 and the quality policy of Technological University (Toungoo)
(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခု၊ ပညာသင်နှစ်အတွက် အရည်အသွေးရည်မှန်းချက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ-
၃။နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)သည်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ISO9001:2008စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီတက္ကသိုလ်၏အရည်အသွေးမူဝါဒများအရ ၀န်ဆောင်မှုရယူသူများအား စိတ်ကျေနပ်မှု( Customer Satisfaction ) ကို (၈၀%) နှင့်အထက် ရရှိသည်အထိဆောင်ရွက်ရန်။